Dib ugu Lugood: Sidee si ay u gudbiyaan Video, Music ka Lugood in Computer
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Lugood Music in Computer kale
Su'aal: Waxaan doonayay inuu u dhaqaaqo maktabadda Lugood aan ka qor jir ah u computer kale muddo bilo ah. Laakiin waa madax xanuun, gaar ahaan gabayo badan oo aan maktabadda. Maxay tahay inaan sameeyo, oo waxaad tidhaahdaan, music wareejiyo ka iPhone 5 ilaa computer?
Jawaab: Si aad u music maktabadda Lugood wareejiyo computer kale, waxaad leedahay laba jid oo sahlan in la raaco.
Xalka 1: Saxiixa Lugood Library in computer kale la ah drive dibadda adag
Xalka 2: Saxiixa music Lugood in computer kale la TunesGo
Sida aad ogtahay, haddii aad ka soo bixi Lugood ama iibsashada muusikada, videos, audiobook iyo aad u badan, Lugood wuuna badbaadin doonaa iyaga on folder Lugood ugu on your computer. Sidaas darteed, si ay u gudbiyaan Lugood Library in computer kale, waxaad ku shuban kartaa ah drive adag dibadda ama USB flash drive in computer ka, ka dibna, nuqul ka folder Lugood waxaa si.
Marka hore, hel folder Lugood ee kombiyuutarka. In Windows 7, folder Lugood waxaa halkan badbaadiyey: C: \_ Users \_ Maamulaha \_ Music \_ Lugood. Haddii aad computer socda Windows XP, Vista ama kuwa kale, waxaad u tagi kartaa oo heli folder Lugood ee jidka la mid ah badbaadin.
Marka labaad, dejisan iyo rakibi Lugood ee computer kale. Dul jidka badbaadin ah folder Lugood on computer this.
Mar saddexaad, xirmaan adag drive ama USB flash drive dibadda in ay kombiyuutarka. Markaas, nuqul ka folder Lugood jir iyo bedelo mid cusub.
Si kale in ay dib u heeso Lugood iyo playlists in computer cusub waa in la isticmaalo TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) . Download barnaamijka si aad u computer in ay isku day ah!
Tallaabada 1. Ku rakib iyo abuurtaan barnaamijka
Ku rakib oo aanu bilowno Lugood kala iibsiga qalab - Wondershare TunesGo on your computer jir. Markaas, xiriiriyaan iPhone, iPad ama iPod in computer hore via cable USB ah. Barnaamijkan ogaan doonaa iPhone, iPad ama iPod sida ugu dhakhsaha badan uu ku xiran. Markaas, aad iPhone, iPad ama iPod la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Nuqul Lugood music ka computer hore si iPhone / iPad / iPod
Tag "playlist" khaanadda tagay. Markaas, suuqa kala playlist ayaa muujinaysa ilaa xaq. Riix saddexagalka hoos "Add" inay soo qaadaan liiska hoos-hoos ah. Dooro "Add Lugood Playlists".
By default, oo dhan playlists ayaa la hubinayaa. Haddii aad rabto in qaar ka mid ah, uncheck aad playlists aan la rabin. Markaas, guji "OK". Barnaamijkan wuxuu bilaabaa in uu nuqul ka playlists Lugood leh ratings, ciyaaro dacwadood qashanka, iwm si aad iPhone / iPod / iPad.
Tallaabada 3. Transfer Lugood music in computer kale
Markaas, furaysto baxay cable USB soo socda aad iPod / iPad / iPhone oo furaysto galay computer kale si ay u sameeyaan xidhiidh ah oo ka dhexeeya computer iyo iPhone / iPod / iPad. Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijkan on computer cusub.
Guji "playlist" u muujiyo suuqa kala playlist ah. Dooro playlists aad doonayso kaliya haatan laga keeno ka dibna riix "Dhoofinta in". Ka dib markii ay suuqa kala file browser soo booda, waa in aad doorato Jid badbaadiyo in uu kaydiyo playlists kuwan. Markaas, barnaamijkan uu bilaabo inuu wareejiyo playlists Lugood in computer this. Ha illoobin in aad iPhone / iPad / iPod ku xiran inta lagu jiro kala iibsiga.
Fiiro gaar ah: TunesGo si buuxda u taageersan hindisooyin badan Apple, sida iPhone 5s, iPhone 5c, iPad mini, iyo taabashada 5. Ka sokow iPod, waxaad samayn kartaa wareejiyo ah playlists caadiga ah iyo smart dhexeeya iPhone, iPad iyo iPod .
Taasi waa habka ay u nuqul ka music ka music Lugood in computer kale. Hadda, waxaad kartaa in ay Lugood cusub music ah laga keeno Raaxo.
Daawo video tutorial ku dhaqaaqo music Lugood in computer kale.